Uri Nzou here kana kuti Bhatafurayi? | Martech Zone
Chipiri, Zvita 15, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Muvhuro ndakasangana naRoger Williams, Mutungamiri we Inotungamira Hutungamiri Sisitimu. Kusangana neasina purofiti kunogara kuchikurudzira… Roger akachinja dunhu nekuvaka Batsira Indy Online - chirongwa chinopa vechidiki mukana mukushandira nharaunda. Maitiro ake epamhepo uye mashandisiro enhau enhau ave anoshamisa. Zvakare, iyo ROI pachirongwa chake inowoneka.
Roger akagovana fananidzo yandinoda, akabvunza "Uri Nzou here kana kuti Bhatafurayi? "
zvose zviri zviviri nzou nemabhururu hazvikanganwike asi zvine misiyano yakasiyana.
An nzou haisi kugara ichizivikanwa seyakanaka. Nzou yakati kwirei, inowana tsvina kana ichifamba nemumadhaka, ichisiya nzira uye ichisiya mucherechedzo wayo kwayakagara. Nzou dzinokwanisa kuita zvinorema kusimudza uye kufambisa masangano kumberi.
Butterflies vakanaka. Vanotakurwa nemhepo, havasiye mucherechedzo, uye vanobhururuka zvakanaka kubva kunzvimbo kuenda kunzvimbo. Kana vakawira mumadhaka, havana kana kusvibiswa.
Semubatsiri, basa rangu kushandura makambani andinoshanda nawo ave nani. Handikwanise kuva shavishavi, ndinofanira kuva nzou. Kana ndikasawana mhedzisiro yevatengi vangu, ini handisi kuzobudirira uye pakupedzisira ndinorasikirwa nebhizinesi. Kana vatengi vangu vasinganditeerere, handikwanisi kupeperetera kune unotevera mutengi… ndinofanira kudzika pasi muvhu ndogadzira mucherechedzo wangu.
Ndagara ndiri nzou [isa joko rakafutisa pano…], dzimwe nguva kukanganisa. Nekudaro, ndinogadzikana nezvandiri uye ndinoona mutsauko wandakaita nemasangano andakashandira. Ndinofarira kuva nzou. Saka uri chii?
Uri nzou kana shavishavi?
Tags: coltskushambadzira kwechiitikogmTsvaga Kutengesaustream